Novany hifanaraka amin’ny an’ny fanjakana moa ny an’ity farany ny harivan’io. Nanoloana ny tranga dia nanakiana mafy ny fitondram-panjakana fa tsy tomombana ny fitilian’ny avy eo anivon’ny Institut Pasteur de Madagascar, iny 14 may iny ihany. Namely bontana ny ampitso ny IPM fa tsy manatanteraka fakana ireo singa amin’ny olona marary na “prelevement” akory aza ity toeram-pitiliana ity. Tsy nisy, noho izany, ny lesoka avy amin’izy ireo na tamin’ny resaka fitiliana io na ny fikirakirana ny vokatr’izany. Nilaza ny tsy hanaiky mora foana moa ny fitondram-panjakana kanefa tsy hita mazava izay tena tohiny hatramin’izao. Efa manga ve izany ny lanitra eo amin’ny roa tonta sa nanao ahoana ny tohiny ?